Fumana okona kulungileyo kwihlabathi liphela ngeYammer kwishishini lakho
NgoMgqibelo, ngoJuni 23, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngaphambi kwencoko yethu ngolwesiHlanu noHarold Jarche, ndandingekaze ndilive eli gama indawo yokusebenza. Ukusukela ngo-Septemba ophelileyo, iarhente yethu yokuthengisa engenayo iye yaqinisekiswa UROWE emsebenzini. I-ROWE sisiPhumo seMeko yokuSebenza… apho abasebenzi banikwe amandla okusebenza njengoko benqwenela ukuba nje iimfuno zomsebenzi zigqityiwe.
Njengeqela elincinci, umceli mngeni omnye esinaye ngeROWE ukunxibelelana nabanye. Abanye bethu baphendula nge-imeyile, abanye ngefowuni, kwaye abanye akunjalo (njengam!). Xa ndihleli phantsi emsebenzini, ndikuthiyile ukuphazamiseka. Kodwa ayilunganga kubathengi bam okanye abantu endisebenza nabo… abathi ngamanye amaxesha bazame ukundilandela.
UDavid uyiqaphele imicimbi neminye imibutho ephulukana nemveliso evela kwii-imeyile ezininzi nakwiintlanganiso ezininzi kakhulu… engabavumeli abasebenzi ukuba bafumane imisebenzi abasele beyenzile. Uye wathi eminye yemibutho ijikele kwi-Workstreaming. Ukubeka ngokulula, ukuSebenza ngokuBonelela ngendlela yokunxibelelana engaphazamisi kubasebenzi kodwa ivumela abo basondeleyo kuwe ukuba baqonde into osebenza kuyo, xa ufuna uncedo, kwaye ulindele nini iziphumo. Kubonakala ngathi Yammer inokuba sisixhobo esihle soku!
I-Yammer kulula ukuyisebenzisa kodwa inesicelo esinamandla sokubloga esincinci esidibanisa abantu kunye nomxholo ngexesha kunye nendawo. Isebenza ngokufana ne-Facebook okanye i-Twitter, umahluko kukuba ngelixa u-Facebook elungiselela indawo yoluntu, i-Yammer isebenza ngokukodwa kwishishini, ivumela amashishini ukuba enze ngokwezifiso isoftware yenethiwekhi yomsebenzisi yokuxhuma abasebenzi, amaqabane amajelo, abathengi kunye nabanye ngexabiso. ikhonkco.
Unxibelelwano lwasentlalweni lwabucala olufana neYammer lubonelela ngezibonelelo ezininzi kwinkampani. Inika amandla kwaye ixhobise abasebenzi, ikhawulezisa iinkqubo zomsebenzi, iphucula imveliso kwaye ibasele abatsha. Kwaye iziphumo ziphantse zangoko. Umzekelo, i-Yammer ibonelela ngesixhobo esisebenzayo nesisebenzisekayo sokudibanisa italente kunye neetekhnoloji ezisasazeke kwihlabathi liphela kwiqela lokuthengisa kunye neqela lokuthengisa, ebavumela ukuba bazibandakanye kwizicwangciso kwaye baqalise amaphulo ngaphandle komthungo.
Eyona nkxalabo iphambili malunga nenethiwekhi yokunxibelelana kukhuseleko lwedatha. Ngokwendawo yokwahlulahlula kukaYammer (ngaphezulu kwe-Facebook kunye nezinye iisayithi zonxibelelwano zoluntu, oko kukuthi) ukuba yimfihlo kunye nokhuseleko lwedatha, i-portal iya kwi-mile eyongezelelweyo ukuqinisekisa ngokhuseleko oluphezulu. I-Yammer idibanisa uphononongo lokhuseleko kuyilo, iprototype, kunye nezigaba zokuhanjiswa. Lonke unxibelelwano ludlula kwi-SSL / TLS, kwaye idatha ihamba kumanqanaba asezantsi asezantsi okucima umlilo ukukhusela ukuvuza kunxibelelwano. Iiseva zesicelo sewebhu zihlala ngokwasemzimbeni nangokufanelekileyo zahlulwe kwiiseva zedatha. Ezi zikhuselo, kunye nokunye ukuqhutywa kwemisebenzi yokhuseleko lokusila njengokujikeleza iwotshi yevidiyo, ii-biometric kunye neepini ezitshixwayo, ulawulo olungqongqo lokufikelela kubasebenzi, ukungena kweenkcukacha zokungena kwabahambi, ukungena ngemvume okukodwa kunye nemigaqo-nkqubo yokukhuseleka kwephasiwedi, ukuqinisekiswa okuqinisekileyo kunye nokuqinisekisa ngaphezulu inotshi ukhuseleko.
Buyela kwindawo yokuSebenza. Ngenxa yemiceli mngeni kwizinto zethu eziphambili ngokubaluleka, iishedyuli, indawo kunye nokusebenza ... ukusebenzisa iYammer kunokuba yindlela elungileyo kuthi sonke ukuba sigcine umkhondo omnye komnye. Endaweni yokuba ndibize umphuhlisi wam, ndinokujonga nje uYammer kwaye ndibone ukuba uphakamisa ntoni okanye xa enokufumaneka! Oku ayisiyoncedo nje kwishishini elincinci… cinga ukwanda konxibelelwano kunye nokuncitshiswa kwengxolo ishishini elinokuba nayo nayo!
U-Yammer unazo zombini desktop kunye nezicelo zeselfowuni iyafumaneka, ukudityaniswa kwe-Skype, kunye netoni yezinye izinto.
tags: unxibelelwano kwezentlaloindawo yokusebenzaintlama
Juni 25, 2012 ngo-4: 15 PM
Iindaba ezinomdla namhlanje zokuba uMicrosoft uthenge iYammer. Ndicinga ukuba linyathelo elikhulu!
Juni 26, 2012 ngo-10: 49 PM
Ndimele nditsho – ndonwabele kakhulu ukusebenzisa esi sixhobo. Into ebendiyidinga kukutyhala. Yehlisa ii-imeyile, igcina abantu osebenza nabo benolwazi, kwaye igcina iiprojekthi zijonge. Ifana ne-Facebook, kodwa yeyomsebenzi kuphela!